Ikhaya-Isoftware yeDisplay Multi yeSoftware (iDigic Signage)
Isoftware ye-Multi Display ye-EMD (i-Digic Signage)
Esona sisombululo sifikelelekayo sombane esibonakalayo kwimarike.
Amagumbi ethu okubukisa
Izikrini zamkelo zedijithali
Imfashini kunye nokuthengisa
Unyango kunye neMpilo
Iivenkile zokutyela kunye neekhefi
Jonga iividiyo zethu
Eyona nto ifikelelekayo kwintengiso.
JONGELA I VIDEO
Isebenza ngokulula njani iMiboniso emininzi
Nokuba ulishishini elincinci okanye ishishini elikhulu, iMiboniso eNinzi yokubonisa yenza kube lula ukubonisa imultimedia yakho kwimiboniso emininzi. Ilayisensi enye, unokubonisa ukuya kuthi ga kwimithombo engama-1 yemithombo yeendaba ngexesha elinye, kuyo yonke imiboniso emi-24 eyahlukeneyo. Thetha nathi malunga nezisombululo zethu zeshishini ukhetho olungenamda.
Seta ikhompyuter imbonakalo yeTV.
Faka isoftware yeMiboniso eNinzi.
Qwalasela useto lwakho lomboniso.
NGABANI BONKE OBUCHWEPHESHE?
Umboniso oBonisa izinto ezininzi kulula kuwo nawuphi na umbutho ofuna ukubonisa ulwazi lwedijithali kubaxumi babo kunye neendwendwe.
Cofa apha ngezantsi ukufumana okuninzi.
Iikati kunye neerestyu
Ivenkile yefashoni kunye neVenkile
Amachiza kunye neMpilo
Uza kuyisebenzisa njani?
Ngaba kulula ukuyi bonisa?
Nxibelelana nathi ukuze sixoxe
Uninzi lwabakhuphisana nathi babiza ii- € 30 zesikrini ngasinye, ngenyanga. Ngenxa yoko, uhlawula ngaphezulu kwe- € 360 ngonyaka ngesikrini esinye! Abanye abantu esikhuphisana nabo bakubuza ukuba uthenge isoftware eyongezelelweyo ngexabiso le- € 1200 epokothweni. NgeDisplay Multi Display, uhlawula kube kanye kuphela.
IXESHA LOKUFUNDA KAKHULU
Sebenzisa ukuya kwimiboniso emi-6 ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo.
Akukho zindleko ziqhubekayo okanye umrhumo wenyanga.
Sebenzisa ikhomputha yakho ukwenza isoftware.
Akukho intanethi efunekayo.
Ixabiso lonyuka ngenani leemiboniso.
Hlawula umrhumo wenyanga.
Thenga umdlali weqela lesithathu ukuqhuba isoftware.
Inkonzo esekwe lilifu efuna intanethi.
Ngokukhetha iDisplay Multi Display, ungagcina ukuya kuthi ga kwi-250 yeedola ngenyanga, loo nto yi- € 3000 ngonyaka kwisisombululo sakho se-digital alama.
INDLELA YOKUZONWABISA NGOKULULA IMIZIZO
Qalisa iwebhusayithi, ukusasaza ividiyo, kwaye ubonise iividiyo zasekhaya, imifanekiso kunye nomculo.
Kulula ukusebenzisa iplagi kwaye udlale isoftware. Akukho zixhobo zeqela lesithathu ezifunekayo.
Isoftware isebenza kumatshini wakho wasekhaya. Akukho intanethi okanye inethiwekhi enzima yelifu efunekayo.
Hlawula kube kanye ngelayisensi yakho yokuThengisa iMidlalo eNgcwele kwaye uyisebenzise ngonaphakade.
Sinikezela ngenkxaso ebalaseleyo. Khangela zethu okubelelwe elwazini, okanye ucele uqeqesho lwabucala.
Ngemvume yokushishina, unokubonisa kwaye uqhube ezinye iinkqubo zesoftware!
OKUTHETHWA NGABAKHONZI BAM
Phambi kokuba sibhale iimenyu zethu kwisilayidi. Yayinzima kwaye inefuthe elincinci. NgeDisplay Multi Display, ngokukhawuleza sitsala umdla wabathengi bethu.
Umphathi weBhasari, eBrussels
I-EMD inexabiso elichaphazela lonke ukhuphiswano! Ixabiso liluncedo kakhulu kwaye akukho ntlawulo ifihliweyo. Iqela le-EMD liphendula kakhulu kwaye liqwalasele zonke iimfuno zam.
Umphathi Wezindlu, uLouvain-la-Neuve
Njengoko igama libonisa, i-EMD kulula ukuyisebenzisa. Andazi kwanto malunga neekhompyuter. Nge-EMD sinesisombululo esilinganiswe kakuhle kwiofisi yethu yamazinyo.
Ugqirha wamazinyo, eBrussels
Rhoqo ngenyanga, ngaphezulu kwamashishini ayi-150 asebenzisa isoftware ukubonisa ividiyo, imifanekiso kunye nomxholo wewebhusayithi ukukhuthaza nokubhengeza amashishini abo.
INDLELA YOKUGQIBELA YOKUCELWA
Siyayibiza lula uboniso oluninzi kuba ukuphakama ubaleke kunye
isisombululo sophawu lwedijithali nathi kulula.
Yonke into oyifunayo kufuneka uqalise ...
Ikhompyuter enekhadi lemizobo - elikwaziyo ukusebenzisa imiboniso emininzi.
Uninzi lweTV njengoko ufuna kulungiselelo lwakho lomboniso.
Isoftware yeMiboniso emininzi.
Akukho ndleko zifihliweyo.
Akukho ntlawulo yenyanga.
Akukho zixhobo zinzima.
Ilayisensi enye engenazidibanisi okanye zokuhlaziya.
ngaphandle. IVAT *
Ilayisensi enye ye-1
Bonisa ukuya kuma-24 imimandla yeendaba ekhethekileyo
Uhlaziyo lweSoftware yefu kwiinyanga ezili-12
Uqeqesho kwi-Intanethi ngenkxaso
Ukufakwa kweKhompyutha kwesoftware
Olona khetho lwethu lubalulekileyo.
Uhlaziyo lweSoftware yamafu
Uhlaziyo lwasimahla lweenyanga ezili-12
Uqeqesho olu-1 lweyure kwi-Intanethi kunye nabasebenzi beNkxaso
Ukufakwa kunye neNkxaso kwi-Onsite
Isoftware yethu epheleleyo kunye neenkonzo ezininzi.
Nxibelelana nathi ngamaxabiso.
Ezinye zeenkonzo ezifumanekayo kubathengi bethu beshishini:
Ukufikelela kwinkxaso yobugcisa ekude
Nxibelelana nathi namhlanje ukuxoxa ngeemfuno zakho.
* Imali eyongezelelweyo yonyaka isebenza kuphela ukuba ubhalisela i ukhetho isivumelwano sesondlo. Cofa apha Ukufumana okungakumbi.
Umthengi wethu uthanda nje indlela elula yokubonisa imidiya yabo ngokuBonisa ngokuBanzi. Isinxibelelanisi sesoftware sikukhokelela kwinkqubo yoqwalaselo lwenqanaba ngenyathelo, kukubuza yonke imibuzo elungileyo apha endleleni. Awudingi ukuba yingcali yezobuchwephesha ukuze uphakame uqhubeke ngokuBonisa iiMidlalo ezininzi.
Yakhelwe kwisibonisi sewizadi
Isilumkisi esibonakalayo se-Multi Display sikhokela kwinkqubo yokuseta.
Gcina ugcino oluninzi
Gcina iisetingi ezininzi zokubonisa kwaye uzilayishe ngokulula.
​Ukukhetha ulwimi: isiNgesi, isiFrentshi, iSpanish iyaqhubeka ...
Ngaba ufuna uncedo olongezelelweyo? Jonga isiCwangciso sethu samaxabiso aMiselweyo esiza noqeqesho ngeyure enye kunye nenkxaso.
Ufuna unikezo olukhethekileyo kunye nezaphulelo?
Sayina kwincwadana yethu kwaye uyigcine.
Siza kukuthumela iincwadana zeendaba kunye neekhowudi zezaphulelo. Asisayi kugaxana, ukurenta okanye ukuthengisa ulwazi lwakho.
Umboniso Olula Wokubonisa
Copyright © 2020 Isoftware ye-Multi Display ye-EMD (i-Digic Signage)
Molo, ndingakunceda njani?
Nxibelelana kwaye ucele isicatshulwa ...